Usola iSafa ngokulawulwa "yiGupta" | News24
Usola iSafa ngokulawulwa "yiGupta"
Durban - Buhlela ukudlulela kwiBar Council of Johannesburg ubuholi beSouth African Football Association (Safa) eThekwini obungavunwanga yisinqumo sikaHilton Epstein SC obengumahluleli ozimele embangweni wokuphathwa kwalesi sifunda.
Ekhipha isinqumo, u-Epstein uphakamise ukuthi iSafa eThekwini eHoy Park iqhubeke nemisebenzi yasehhovisi bese ididiyela izinhlelo zokhetho oluzokuba mhla zintathu kuZibandlela (December).
Ube esephakamisa ukuhlakazwa kobuholi baseCurries Fountain obebubanga nobaseHoy Park.
UMazwi Mkhize onguMengameli wohlaka lwaseCurries Fountain, uthi ukuthalalisa kweSafa ngeDispute abayifake bephonsela inselelo isinqumo sika-Epstein, sekuholele ekutheni bathathe isinqumo sokudlulela kwiBar Council okuwuphiko olubheka ukusebenza kwezazi zomthetho.
"Bonke abantu beSafa kuzwelonke basibelesele ngokuthi isinqumo sika-Epstein siwujuqu. Siyakwazi lokho, kodwa besicela ukuba asinike ithuba, asichazele ukuthi ufinyelele kanjani kulezi zinqumo. Kakukwazi ukuthi angaphasisa ukuthi i-Ashley mayiqhubeke nokudlala kwiMotsepe League ekubeni ethi ubuholi bethu (obuyihambisile) mabuhlakazwe.
"Ulukhetha kanjani uhlangothi olulodwa ukuthi maludidiyele izinhlelo zokhetho? Ngeke sibe yingxenye yokhetho olukhonjwa kuZibandlela. Thina silinde ukhetho oluzokuba ngonyaka wezi-2018 eThekwini. Sikhethwe kubuka izwe futhi iSafa ibijube abaholi bayo. ISafa ithule ithini ngoba ubuholi baseHoy Park buyifake enkantolo? Ithini njengoba ubuholi baseHoy Park buphule umyalelo obuvela ehhovisi likazwelonke?
"ISafa kubukeka sengathi isigwinywe ngu-Epstein njengeNingizimu Afrika okuthiwa ilawulwa wumndeni wakwaGupta. U-Epstein uma efuna ukuphatha ibhola, makahambe ayongena ezinhlakeni zebhola ngakubo ngisho kungathiwa uhlala ezindaweni zabadla izambane likapondo," kusho uMkhize.
OLUNYE UDABA: Ufunwa e-Europe umdlali weDowns obiza u-R32m
Uphinde wazwakalisa ukungaphatheki kahle ngokusebenza kukaSimphiwe Xaba omele isifundazwe ezingeni likazwelonke. Uthi usenokukhombisa ukuthambekela ebuholini baseHoy Park ngemuva kokuthenjiswa ukuthi uzokuba nguSihlalo weSafa KwaZulu-Natal okhethweni oluzayo.
Leli phephandaba kalikwazanga ukuthola uDennis Mumble oyisikhulu seSafa ukuphawula ngezinsolo zokuthi iSafa isigwinywe ngabezinhlaka zezomthetho kuleli njengoba belungangeni ucingo lwakhe.
Nokho omunye wabaholi beSafa kuzwelonke ongekho emagunyeni okukhuluma nabezindaba, uthe uXaba wenza lokhu okufanelekile.
"Sonke savuma ukuthi isinqumo sejaji siwujuqu. ISafa yasayina phansi ivuma lokhu. Manje uXaba wenza lokhu okuphakanyiswe ngu-Epstein ukuthi kwenziwe. Yisinqumo sika-Epstein esiphikisana nobuholi bukaMkhize, uXaba usenziwa ibhaxa nje. U-Epstein ngeke alokhu ezophendula kubantu abangazi lutho ngomthetho. Uzophendula nxa ebizwa yiCourt of Arbitration for Sport. Kalukho olunye uhlaka ayoke aluphendule ngaphandle kwalolu.
"Ukhetho kumele luqhubeke kudlulelwe phambili. Uma kukhethwa u-Alpha Mchunu ohola iHoy Park kulungile, sizosebenza naye ngoba uzokube ekhethwe ngabantu. Ngiyakuvuma impela ukuthi sisenkanjini eyodwa nobuholi bukaMkhize kodwa kasikwazi ukulwa nomthetho. Kumele kuhlonishwe lokho sidlulele phambili," kusho lo mholi.